Cabdiweli Gaas oo si aan caadi aheyn u difaacay kursiga Fahad Yaasiin – Soomaali 24 Media Network
Posted on April 2, 2022 Leave a Comment on Cabdiweli Gaas oo si aan caadi aheyn u difaacay kursiga Fahad Yaasiin
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay khilaafka cusub ee cagaha ay la gashay doorashada Soomaaliya, ayaa eedeynta dhan dusha ka saaray R’iisul Wasaare Rooble iyo guddiga doorashooyinka federaalka.
“Labada dhinac ee siyaasadda isku haya waxay ka dhex hadlayaan guddiga doorashada, markii horena guddi fiican oo shaqadiisa gudanaya ma aheyn, howshii laga rebay guddigaas ma qaban, waxa hadda isku jawaabayana ayaga maahane cid kale ayaa ka dhex hadleysa,” ayuu yiri Cabdiweli Gaas.
Gaas oo la hadlay BBC ayaa wax laga weydiiyey go’aanadii ka soo baxay HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed, kuwaas oo sheegay inay ka aamin baxeen guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federal, kadib markii liiska xubnaha dooran ee baarlamaanka laga reebay Fahad Yaasiin oo HirShabeelle laga soo doortay iyo 3 xubnood oo ka yimid K/Galbeed.
Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka, sidoo kale soo noqday Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa ku taliyey in afartaas kursi ee Fahad Yaasiin uu ku jiro sidooda loo sii daayo.
← Xog: Khilaaf ka dhex qarxay Qoor Qoor iyo ku xigeenkiisa iyo Cali Ciid oo biilkii laga jartay
XOG-Nabad sugidda Soomaaliya oo sadex garab noqotay, iyo Digniin Amni oo taagan →